कोरोनाभाइरस, नागरिक र सरकार ! | दर्पण दैनिक
कोरोनाभाइरस, नागरिक र सरकार !
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ ५ गते १२:०२
रतन तिरुवा, अध्यक्ष, नेपाल श्रमिक पार्टी
कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको छ । यो महामारीले मानव जातिको अस्तित्व माथी नै प्रश्न उठाएको छ । विश्वका अधिकांश देशहरुको सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई अस्तव्यस्त र ध्वस्त पारिदिएको छ । यसबाट हाम्रो देश नेपाल पनि बाँकी रहेन । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर नेपालमा धेरै पछि भित्रिएको थियो । त्यसबेला नागरिकहरुमा डरत्रास धेरै थियो । तत्काल सरकारले बन्दाबन्दी गर्यो र त्यो निर्णय धेरै उचित थियो । किनभने कोरोना भाइरसबाट बच्ने एउटा मात्र उपाय भनेकै बन्दाबन्दी थियो । सरकार र समाज दुबै कोरोना भाइरसको विरुद्धको लडाइँमा सक्रिय भएर लागेका थिए । फलस्वरूप यो रोगबाट सोचेभन्दा कम क्षेती भयो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट उन्मुक्ति नपाउदै दोस्रो लहर भित्रिएको छ । पहिलेकोभन्दा अहिलेको कोरोना भाइरसको लहर निकै संक्रामक र घातक छ भनेर बताइएको छ । यो भाइरस युवा र बालबालिकाहरुमा बढी देखिएको छ । यहाँ पर्याप्त मात्रामा हस्पिटल छैनन ।भएका हस्पिटलहरुमा बेड छैन । अक्सिजन सिलेन्डर , र अन्या स्वास्थ्य सामाग्रीहरु पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध छैनन । त्यसैले गर्दा दोस्रो लहरको भाइरल तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । मृतकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । यस्को ब्यवस्थापन वा रोकथाम गर्न सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरुको तयार बिल्कुलै थिएन । आवश्यक स्वस्थ्य सामाग्रीहरु बिना नै स्वस्थकर्मीहरु बिरामीको उपचारमा खट्नु पर्यो । यस्तो विषय र परिस्थितिमा सरकार जिम्मेवार र कृयाशिल हुनुपर्थ्यो ।
कोरोना भाइरस आयातित समस्या हो । अहिले कोरोना भाइरसका करिबकरिब तीसवटा भेरियन्ट पत्ता लागेको बताइन्छ । पहिलोको लहरभन्दा अहिलेको लहर बढी संक्रामक रहेको देखिन्छ । यो भाइरस म्युटेट हुनुमा स्वयम् मानिसका गतिविधिहरु बढी जिम्मेवार हुन्छ्न । इमानदारीपूर्वक सरकारी नीति नियमहरुको पालना र सावधानी अपनाएको पनि देखिदैँन । ठुल्ठुला भिड, समुह, बनाएर लापरबाहीका साथ भोजभतेर गर्ने, जन्ती जाने र बिनाकाम हिँडडुल गरिरहने मानिसहरुको सख्या पनि उत्तिकै देखिन्छ । अहिले देशको करिब एकचौथाई भूगोलमा कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण छ । विशेष गरी ठुला सहर र भारतीय सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ । नागरिकस्तरबाट बढी हेलचेक्राइ र लापरबाही गरिएको देखिन्छ ।सरकारी नितिनियमको पालना गर्दै जिम्मेवार नागरिकको भुमिका निर्बाह गरेर अबको करिबकरिब एक महिनासम्म आउने हरेक प्रकारका चुनौती र संकटको सामना गर्न सक्यौं भने कोरोना भाइरसले हार्नेछ र हामी जित्नेछौँ ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड 19 को कारणले देश अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ । अहिलेको समयमा आवश्यक हस्पिटल, चिकित्सक, औषधी, अक्सिजन र अन्य मेडिकल सामग्रीहरुको बन्दोबस्त सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । कोरोना भाइरलको भ्याक्सिन पनि खरिद गर्न सकिरहेको छैन । दिनप्रतिदिन संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । दिनहुँ मृत्युदर झन अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयूको कमिले गर्दा एक मुठ्ठी सास फेर्न नसकेर छटपटाउँदै मानिसहरू मरिरहेका हृदयबिदारक तस्बिरहरु हामीले देखिरहेका छौँ । एकातिर रोगले मानिसहरुलाई तड्पाइरहेको छ भने अर्कोतिर भोकले मानिसहरुलाई लखेटिरहेको छ । विशेष गरी कामदार बर्गका गरिब जनताहरुलाई कोरोनाले मृत्यु र कष्ट दुबैको भागिदार बनाएको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि किसिम राहत प्याकेज वा खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध गराएको छैन । धेरै मानिसको चुलो बल्न मुस्किल भएको हुनाले पिडालाइ थेग्न नसकेर आत्महत्या गरिसकेका छ्न । यस्तो आपतबिपतमा पनि सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । सरकार आफ्नै तालसुरमा छ । सत्ता टिकाउने र गिराउने होटबाजिमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले आफ्नो दाहित्व र कर्तव्य बिर्सिएको छ । यस्तो संकटको बेला नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु पर्ने हैन र ? उल्टै मरेका लासको कात्रोमा पनि, कमिशन खान थालिरहेका प्रमाणहरु बजारमा छताछुल्ल भैरहेका छ्न । सरकारको भ्रष्टाचारको नाङ्गो रुप देखिन थालेको छ ।
अस्ति भर्खर स्वास्थमन्त्रीले ८० % भुक्तानी गरिसकेको भ्याक्सिन बिचौलियाका कारणले २७ दिन झमेलामा परेर नेपाल आउन नसकेको कुरा बताईसकेका छन् । लासमा पनि कमिशन नछाड्ने प्रवृत्तिले आम जनमानसमा सरकार प्रति घृणा पैदा भएको छ । यस्तो मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने को हो ? यस्को दण्ड के हो ? यस्तालाइ कारबाही गरिनुपर्छ कि पर्दैन भनीखोज्दै जादा प्रधानमन्त्री ओलिका वरिपरिका विश्वसनियका पात्रहरुको तस्बिर फेला परेको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयम वा उहाँको निर्देशनमा नै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुन्छ्न । यदि यसो हुदैन थियो भने तत्काल छानबिन भएर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही भएको हाम्रै आँखाले देख्न पाउथ्यो । शासणसत्ताका मालिकहरुको वरिपरि घुमिरहेका ब्वासाहरुलाई कसले कारबाही गर्न सक्छ र ? उनीहरुको लागि न संविधान छ न नितिनियम छ न त पुलिसप्रशासन नैछ । महामारीलाई रोक्ने वा हटाउने धेरै उपायहरु सरकार सङ्ग थिए यदि समयमै सचेत भएको भए । समय प्रशस्त थियो । महामारीको दोश्रो लहरले प्रष्ट सन्देश दिइरहँदा राज्य नियन्त्रणमा जुटेन । भ्युटावर प्रतिस्पर्धा गर्न र धार्मिक उत्तेजना फैलाउन अर्बभन्दा बढीको स्वर्ण जलारी राख्न र माणिमा राम मन्दिर बनाउन मै बेस्त भयाे । कोरोना भाइरसलाई न मन्दिरले छेक्यो नत टावरबाट देख्यो । अन्तिममा चासो भित्र नपरेका ती अस्पताल चाहिय, हेपिएका ती चिकित्सकरु चाहिए । सरकारका कामलाई बन्द गरेर बिगत लामो समय देखि पार्टी भित्रको आन्तरिक भालेभिडन्तमा राज्य फस्यो । प्रतिस्पर्धा गर्दै ठुल्ठुला नाराबाजी, जुलुस, आमसभा गर्दै गुटउपगुटका तमासा देखायो । देश र जनताको विषयमा कहिलै छलफल र बहस भएन/गरेन । दिनमा ३/४ पटक पार्टीका गुटउपगुटका स्वार्थमा केन्द्रित भएर छलफल भए तर नागरिकको जीउधनको रक्षाका निम्ति कहिलै छलफल भएन । अहिले पनि भालेभिडन्त सकिएको छैन ।
जनताको निम्ति कोरोनाको विषयमा छलफल भैरहेको छैन त्यही झगडा जारी छ । यस्तो भिषम परिस्थितिमा सरकार, पार्टी र जनता एकजुट भएर कोरोनासङ्ग लडाइ गर्नुपर्ने बेला आन्तरिक किचलोमा नै अलमलिरहेका छन । नागरिक अभिभावक बिहिन छन । राज्य दाहित्व र कर्तव्यहिन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको आन्तरिक बिबाद मिलाउन र सत्ता बचाउन धौधौ परिरहेको छ । अन्य पार्टी र नेताहरु पनि संकटको बेला एकजुट हुन छाडेर हलो अड्काउदै गोरु चुटिरहेका छ्न । सत्ता फेरबदलको अन्तिम संघर्ष चलाइरहेका छ्न । उनिहरुलाई झन के को जनता ? के को कोरोना एकमात्र दाउपेच सत्ता । यी सबै विषयकाे केन्द्रमा राजनीति हुन्छ र चालकमा मुल नेतित्व हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि आन्तरिक र बाहिरी सत्ता संघर्षको अन्तिम लडाइ लडिरहेका छन । नागरिक र कोरोना प्रधानमन्त्रीको नजरबाट निकै टाढा छ्न ।
अन्तिममा : कोरोना भाइरलले गर्दा नागरिकहरु जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अन्तिम सास फेर्दै छटपटाइरहेका छ्न भने सरकार वा प्रधानमन्त्री सत्ता संघर्षको अन्तिम लडाइँमा छ्न । यस्तो आपतकालीन समयमा पनि यदि सरकार नागरिकका हरेक दुख, कष्ट र पिडामा साथ दिन सक्दैन भने त्यो दलाल सरकार हो । त्यो भ्रष्टसरकार हो । त्यो नालायक , गैरजिम्मेवार र निकम्मा सरकार हो । त्यो गद्दार शासक हो । चेतना भया ।